နယူးယောက်ပြည်နယ်က အကျဉ်းသား ၅ သောင်းကျော်ကို တက်ဘလက်တွေ ပေးမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး နယူးယောက်ပြည်နယ်က အကျဉ်းသား ၅ သောင်းကျော်ကို တက်ဘလက်တွေ ပေးမယ်
LANCASTER, CALIF. - JUNE 10, 2010: Inmates prepare to leave for dinner in Facility B at the California State Prison-Lancaster, on June 10, 2010. 200 inmates are housed in cells (top) and due to overcrowding another 40 inmates sleep in bunks on the day room area (floor). There are approximately 4600 prisoners currently in this state prison which normally houses 2300 inmates. A legal battle over who gets to control California's massive spending on prison-judges or corrections officials-may be headed to the U.S. Supreme Court with overcrowding at the state's 33 prisons at the center of the debate.
နယူးယောက်ပြည်နယ်က အကျဉ်းသား ၅ သောင်းကျော်ကို တက်ဘလက်တွေ ပေးမယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ပြည်နယ် အကျဉ်းထောင်က အကျဉ်းသား ၅၀၀၀၀ ကျော် ဟာ အစိုးရဆီကနေ တက်ဘလက် အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းသားတွေ ဟာ တက်ဘလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီး စာဖတ်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာအပြင် မိသားစုတွေဆီ အီးမေလ်းပေးပို့နိုင်မယ့်အ ခွင့်ရေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဟာ အ ကျဉ်းသားတွေကိုတက်ဘလက် ကူညီနိုင်စေဖို့ Jpay နည်းပညာကုမ္ပဏီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီက ပြည်နယ်တဝှမ်းရှိအကျဉ်းသားတွေအတွက် တက်ဘလက် အ ခမဲ့ကူညီထောက်ပံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းသားတွေကို တက်ဘလက်ထောက်ပံမှုကြောင့် ပညာရေးအရင်းမြစ်ပိုင်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အပြင် ထောင်အာဏပိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကျေနပ်တာတွေကို တိုင်ကြားလာနိုင်မယ်လို့ Jpay ကပြောပါတယ်။
နယူးယောက် အာ ဏာပိုင်တွေ ဟာ ထောင်အတွင်း ကွန်ပြူတာစနစ်အတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတရာကုန်ကျခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
နယူးယောကျပွညျနယျက အကဉျြးသား ၅ သောငျးကြျောကို တကျဘလကျတှေ ပေးမယျ
အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးယောကျပွညျနယျ အကဉျြးထောငျက အကဉျြးသား ၅၀ဝ၀ဝ ကြျော ဟာ အစိုးရဆီကနေ တကျဘလကျ အခမဲ့ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
အကဉျြးသားတှေ ဟာ တကျဘလကျတှကေိုအသုံးပွုပွီး စာဖတျတာ၊ သီခငျြးနားထောငျတာအပွငျ မိသားစုတှဆေီ အီးမလျေးပေးပို့နိုငျမယျ့အ ခှငျ့ရေးတှရေရှိမှာဖွဈပါတယျ။
နယူးယောကျ ပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ဟာ အ ကဉျြးသားတှကေိုတကျဘလကျ ကူညီနိုငျစဖေို့ Jpay နညျးပညာကုမ်ပဏီနဲ့ဆှေးနှေးမှုတှလေုပျဆောငျနပွေီး အဆိုပါ ကုမ်ပဏီက ပွညျနယျတဝှမျးရှိအကဉျြးသားတှအေတှကျ တကျဘလကျ အ ခမဲ့ကူညီထောကျပံပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အကဉျြးသားတှကေို တကျဘလကျထောကျပံမှုကွောငျ့ ပညာရေးအရငျးမွဈပိုငျးတှကေို ဆကျလကျလုပျဆောငျနိုငျမယျ့အပွငျ ထောငျအာဏပိုငျတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မကနြေပျတာတှကေို တိုငျကွားလာနိုငျမယျလို့ Jpay ကပွောပါတယျ။
နယူးယောကျ အာ ဏာပိုငျတှေ ဟာ ထောငျအတှငျး ကှနျပွူတာစနဈအတှကျငှကွေေးတဈစုံတရာကုနျကခြံမှာမဟုတျဘူးလို့ ဆိုထားပါတယျ။
Previous article အင်ဒိုနေအိမ်တစ်အိမ်မှာ ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့ မိကျောင်းတစ်ကောင်မွေးမြူထား
Next articleပီရူးမှာ တရားမ၀ယ်သယ်ဆောင်လာတဲ့ ငှက် ၅၁၈ ကောင်သိမ်းဆည်းရရှိ